Ilaa hadda, tiro badan oo ah noocyada canabka ah ayaa la soo saaray oo dhammaantood waxay leeyihiin faa'iidooyin gaar ah, kuwaas oo ay helaan jacaylka beeraleyda. Ka mid ah noocyo cusub oo aan weli la galay diiwaanka gobolka ee noocyo canab, "Transformation" gaar ahaan muhiim ah. Faa'idada weyni waa awoodda loo leeyahay in la keeno wax-soosaarka wanaagsan iyo kan sare ee gobolka oo keliya, laakiin meelaha cimilada leh.
Aad bay u adag tahay in la kulmo qof aan jeclaan laheyn canab. Xitaa dadka deggan Koonfurta, oo u muuqda in ay ku dhaceen badi aad u ballaadhan oo kala duwan oo ka mid ah nooca berry delicious, weli walaacsan iyaga. Laakiin, xitaa inkastoo dhammaan khalkhalka koonfureed, labadaba iyo dadka deggan gobollada kale ee cimiladu waxay si weyn uga mahadcelinayaan nooca caanaha sida Kesha.
Fasal canab "Laura"
Waxyaabaha kala duwan ee canab loo yaqaana "Laura" ayaa muddo dheer ka soo jiidatay taageerayaasha badan ee viticulture. Kooxihiisii ​​quruxda badanaa ee quruxda badan ayaa la weydiistay in laga saaro laanta geedka isla markiiba isku dayey. "Laura" waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee canab cows, taas oo inta badan laga heli karo suuqyada iyo makhaayadaha xagaaga.
Dhammaan noocyada canabka ah waxay leeyihiin sifooyin u gaar ah, kuwaas oo bannaanka u jecel yihiin. Tani waxay ka hadlaysaa maaha oo kaliya sifooyinka dhadhanka iyo xajmiga rucubyada, laakiin sidoo kale qulqulista, korniinka, wakhtiyada dhirta iyo ka saarista, iyo xeerarka beeritaanka iyo daryeelka. Waxay ku saabsan tahay sifooyinka noocan ah ee kala duwan ee canab "Codreanca", taas oo loo tixgeliyo noocyo kala duwan, waxayna kuu sheegi doonaan hoos.
Kala duwanaanshaha canabka "Moldova"
Ka mid ah jilicsan canab ah delicious, malaha, ma jiri doonaan kuwa aan maqlin oo ku saabsan Moldova kala duwan. Canabkani wuxuu si fudud u caan ku yahay, taas oo uu aad ugu jecel yahay growers growers. Waxay leedahay iska caabin aad u sareeya iyo daryeel aan qabyo ahayn. In kasta oo xaqiiqda ah in noocyada kala duwan ma haysan kooxo waaweyn iyo nooca berry, waxaa weli soo jiidata fiiro gaar ah oo dalagyo dhadhan fiican leh.
Caleemaha kala duwan ee "Arcadia" waxay muddo dheer noqdeen quruxda dhabta ah ee guryaha iyo guryaha beeraha waaweyn. Kala duwanaantani waxay u qalantay sida jacaylka guud ee loo yaqaan "winegrowers not only because of the tactical quality of the crops, laakiin sidoo kale sababtoo ah adkeysiga sare ee aan caadiga ahayn ee xaaladaha cimilada iyo badbaadada fudud ee gobollada kala duwan ee cimilada.
Kala duwanaanta canabka "Cardinal"
In dalalka koonfurta ee Ukraine casri ah iyo Ruushka, viticulture waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dalagyada ugu caansan beeraha. Laga yaabe this thanks to this, maanta oo ah warshad of Gods ayaa noqday mid aad u awoodi karo in koraya qof kasta. Dhab ahaantii, way adagtahay in la helo goobo gaar ah, oo aan lagu qurxin laamaha daaqa.
Xannaanaynta iyo taranta noocyo cusub oo canab ah ayaa lagu dhaqmaa kumanaan sanadood sida xirfadlayaal, sida hiitiryada fudud. Waad ku mahadsan tahay dadaalkooda iyo sanado badan oo dadaal ah, tiro badan oo ah noocyada canabka ah ayaa horeba loo abuuray kaas oo ku qanciya goryaan kasta. Gaar ahaan, mid ka mid ah natiijooyinka tijaabooyinka hiwaayadda, taas oo ah mid aad u caan ah maanta, waa Cinjir Novocherkassk Anniversary.
Kala duwanaanta canabka "Monarch"
Waxaa jira noocyo badan oo canab oo leh rucubyo waaweyn iyo berry. Xataa iyada oo awoodda dhexdhexaad ah dhexdhexaad ah, qaar ka mid ah xashiishad si gaar ah u shaqeeya ayaa awood u leh inay ku guuleystaan ​​guul aan horay loo arag. Laakiin, marka laga eego noocyada kala duwan ee canabkeena Monarch, dadaal gaar ah looma baahna. Ka dib oo dhan, xitaa inkastoo ay tahay qiyaasta celceliska of farabadan of canab, berry ah ee canab this si fudud u gaaro qiyaasta Record.
Canabadu waxay muddo dheer noqdeen hanti ma aha oo kaliya beeraha koonfureed ee koonfurta, laakiin sidoo kale goobaha gaarka ah ee gobollada Waqooyiga ee qabow ee Russia. Laakiin dad badan ayaa la yaabay in ay jiraan noocyo asal ah oo dabiici ah oo laga helay cilmiga sayniska waxayna hadda si firfircoon loogu isticmaalaa taranta sidii deeq bixiyayaal badan oo iska caabin ah.
Kuwa doonaya inay ku koraan guriga ama dal canabku waxay inta badan ku qaataan wakhti badan si ay u helaan noocyada ugu fiican iyaga naftooda. Oo waxay u sameeyaan sabab sababtoo ah: waxaa wanaagsan in la qaato laba maalmood oo lagu falanqeeyo barta internetka marka loo barbardhigo baadiyaha koowaad ka dibna dhowr sano ka dib iska daa. Hoos waxaa ku yaal waxaan rabnaa in aan si aad u faahfaahin leh oo leh mid ka mid ah noocyada ugu caansan uguna firfircoon, taas oo ah habboon ee koraya on sirqoollada guriga - canab Veles.
Qaar badan oo naga mid ah oo leh rabitaan weyn ayaa kori doona dalagyada beerta kala duwan ee xagaaga xagaaga. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer waxaanu awood u leenahay inaanu waqti ku filan si aan u daryeelno. Xulashada ugu fiican ee kiiskan waa doorashada ah ee noocyo, taas oo kaliya oo kaliya iyo uma baahna fiiro badan.
Fasal canab "Lydia"
Noocyada ugu caansan ee farsamo ee loo isticmaalo winemaking waa "Isabella" iyo "Lydia". Isla markaa, fasalka labaad wuxuu ku jiraa hooska, sababtoo ah wuxuu leeyahay wax badan oo isbarbardhig ah Isabella, oo waxay inta badan ku magacaabaan "Pink" ama "Red Isabella." Hase yeeshee, canabku "Lydia" wuxuu leeyahay dabeecado gaar ah, taas oo uu ku farxay dad badan oo hareereysan sida hiwaayad iyo sida canab loo isticmaalo miiska, iyo sida warshad ornamental ah.
Iyada oo aan loo eegin tirada noocyada canab, mid kastoo uu leeyahay shakhsiyad gaar ah. Tani waxay sidoo kale ku saabsan dabeecadaha koritaanka geedka canabka ah, iyo diidmada cayayaanka kala duwan iyo, dabcan, sifooyinka ee fruiting. Sababtoo ah noocyo badan oo canab ah, qof kasta ayaa dooran kara dhabta ah waxa soo jiidashada isaga.
Fasal canab "Ataman"
Canabyo maalmahan waxay joogsadeen inay noqdaan wax qalaad ama aan la geli karin. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah dhirta, taas oo ka duwan midba midka kale, labadaba muuqaal iyo dhadhan. Mid ka mid ah waa Ataman. Aan ka hadalno faahfaahin dheeraad ah. Sharaxaad Canab Canag ah Tani waa natiijada naas-nuujinta, isku-duuban oo lagu soo gudbiyo noocyo kala duwan Rizamat iyo Talisman.
Wax kasta oo ay kala duwanyihiin dhammaan noocyada kala duwan ee canabka ah ee laga heli karo xaaladaha waddankeena, si kastaba ha ahaatee, midkeen kastaaba wuxuu leeyahay xayawaankayaga. Haddii aad tahay taageere dhadhan ah caleenta, waxay door bidaan noocyada canab khafiif ah oo doonaya in ay koraan kooxo waaweyn, oo xor u ah inay doortaan canjaarada Fiktooriya.
Waxyaabaha kala duwan ee macaan "Liibiya"
Canabku waa mid aad u faa'iido badan oo leh cawska. Waxaa intaa dheer, noocyada kala duwan waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo ah ma aha oo kaliya dhadhanka, laakiin sidoo kale size, qaababka iyo midabada. Laakiin caleemo badan oo badan, waxa ugu muhiimsan waa wakhti ku habboon canabka. Arrintani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay gobollada leh jawi qabooban, halkaas oo noocyo dambe laga yaabo inaysan waqti u haysan.
Kala duwan caleemaha ugu caansan, oo ka mid ah noocyada xilliga Bisaylkiisa dhexe, si fudud loo yiraahdo Xusuusta canab Negrul. Waxaa la dhigay bred by habka xulashada, ee Moldova, by iskutallaabta laba nooc: Moldavian iyo noocyo kala duwan ee Pieppel. Faahfaahin kala duwan Caleemaha xusuusta ee Negrul waa nooc aad u fiican oo miis leh.
Fasal canab "Aleshenkin"
Noocyada canabka miiska waxaa lagu kala duwan yahay dhadhan fiican iyo muuqaal cajiib ah. Waa wax aan suurtagal ahayn in la gudbiyo kooxo is bislaaday oo aan afurin afkaaga. Iyo midabka cagaarka iyo dhadhanka cajiibka ah ee berry ballaaran ee "Alyosha" ma ka tagi doonaan cid kasta oo indho la'aan ah. Tafaasiisha kala duwan Canab "Aleshenkin" ayaa sidoo kale laga heli karaa magaca "Alyosha" ama "No 328".
Kala duwanaanta canabka "Beauty"
Miyaad xirtaa canabki hore ee xagaaga xagaaga? Fiiri "Beauty", waxay leedahay isku-dhafka wanaagsan ee sonkorta iyo asaasiga macaan, iyo dhadhanka waa fiican! Canab "Pretty Woman" Caleemaha "Pretty Woman" ayaa waxaa loo weeciyay qoryo caan ah Yevgeny Pavlovsky. Canabkani wuxuu ka mid yahay noocyada hiwaayadda, maadaama aan noocyo kala duwan loo isticmaalin in lagu shubo, laakiin foomamka miro.